Ny hevitry ny teny hoe Apokalypsy na hoe Daniela - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
Apokalypsy na Daniela:
Ny boky Apokalypsy dia nadika tamin‟ny teny grika izy ity, izany hoe ny boky tany ampiandohana izany na ny original izany dia teny grika, satria ato amin‟ny testamenta vaovao izy, fa ny testamenta taloha dia teny hebreo sy grika no nandikana azy. Ka noho izany dia ny teny hoe Apokalypsy izany dia teny grika “apocalupsis” izy io.
Izy io dia teny roa no nakambana, izany hoe:APO” sy ny hoe “KALIPSY”
ny APO dia midika hoe “ALA” na nesorina, ary ny hoe
 KALIPSY dia midika hoe “SARONA”.
Izany hoe,nyteny hoe “APOKALYPSY” izany dia midika hoe: “ALASARONA”.
Toy ny hoe, misy zavatra miketrika ao ambilany, dia mamoaka fofona manitra be, ka tsy fantatrao izay ao anatiny raha tsy sokafanao ny sarony. Dia toy izany ny boky apokalypsy, na ihany koa hoe: “ALA SARONA”, na ihany koa hoe “FANAMBARANA” na “RÉVÉLATIONS” izany hoe ny tena heviny izany dia :“Fanambarana ilay zavatra miafina”.
Tsy ny olona rehetra no hahalala ny fanambarana, fa rehefa tiana ho fantatry ny rehetra izy dia tsy maintsy alana aloha ny sarony mba hahafantaran‟ny olona azy. Izay koa no mahatonga azy ity antsoina hoe: “livre codé”, sahala amin‟ireny miaramila manana ny “code”-ny ireny, na ny mpanamory fiaramanidina manana ny “code”-ny, ny gendarme manana ny “code”-ny, ny polisy manana ny “code”-ny.
Ka io teni-miafina na “code” io izany no hifandraisany amin‟ny namany.
Toy izany koa ny dokotera, ny scoute izay manana ny “morse” izay hifampiresahany, ka raha tsy mahay ilay “morse” ianao dia tsy hahalala mihitsy izay tiany resahina ao.
Dia toy izany koa ny bokin‟ny apokalypsy izay feno “code”, ka raha tsy mahay mamaha izany “code” izany ianao, dia tsy hisy zavatra ho azonao mihitsy ao.
Dia misy ihany koa moa olona, tsy tia mihitsy, na dia ny maheno ilay anarana hoe apokalypsy fotsiny ihany aza dia efa tsy tiany. Satria raha vao miteny hoe apokalypsy izany dia fotsiny, ho an‟ny olona tsy tena mahalala ny hevitry ny teny hoe apokalypsy izany, dia efa zava-doza sahady no ao an-tsainy. Dia raha maheno izao isika vaovao ka milaza zava-doza amin‟ny fahitalavitra na radio, na zavatra eto an-toerana na any ivelany, ka misy zava-doza miseho, ohatra: tsunami, na rivodoza mafy be , na horohoron-tany mafy be, na tany nihotsaka, na ireny” attentat “ohatra ny niseho tao amerika tamin‟ny “world trade center”, sns…, dia “évènements apocalyptiques” no hilazan‟ny mpanao gazety azy. Ka dia rehefa milaza ilay teny hoe: “apokalypsy” izany ny olona dia efa zava-doza foana no ao antsainy, kanefa ho hitantsika eo, fa tsy tena izany zava-doza izany loatra no tena resahin‟ity boky ity.
Na ihany koa raha vao miresaka apokalypsy ihany koa ny olona, dia efa sekta zava-doza no ao an-tsainy; kanefa moa raha izany tokoa no heviny, dia nahoana ary no nosoratana tao anaty baiboly io apokalypsy io? Fa noho ny tsy fahalalan‟ny olona, dia miteniteny foana ohatra an‟izany izy, satria ny olona dia sahala amin‟ny solosaina iray ka izay zavatra nampidirina ao anatiny ihany no tsy maintsy havoakany.
Ny teny voalohany izany dia ny hoe apo + kalypsy.
Fa efa voalazantsika hatrany ampiandohana izany, fa rehefa miresaka ny bokin‟ny apokalypsy isika, dia tsy maintsy miresaka ihany koa ny bokin‟i Daniela, noho izany dia tsy maintsy omentsika ihany koa izany ny hevitry ny teny hoe : DANIELA izany dia midika hoe : “JEHOVAH NO MPITSARA AHY”. Ka raha miresaka fitsarana izany isika, dia miresaka famaranana ihany koa. Izany hoe, rehefa mitsara izany dia milaza fiafarana, na ianao ho any amin‟ny fanamelohana na ho any amin‟ny famonjena.
Ny fomba fanazavana ity bokin’ny apokalypsy ity:
Izy ity dia efa hitantsika hatrany ambony fa misy endrika telo ny fanazavana ity bokin‟ny apokalypsy ity:
– Ny voalohany dia nyzavatra efa lasana «prétérite», na «passé». Raha mamaky ny bokin‟ny apokalypsy sy ny Daniela izany ianao, dia toa milaza zavatra efa lasa avokoa izy ireo, raha izany endrika izany no hijerenao azy.
– Ny faharoa dia nyzavatra mbola ho avyna” futuriste”, na hoe “future”. Tsy miresaka zavatra hafa afa-tsy ny ho avy izy io, milaza ny zavatra mbola ho avy izany raha izany indray ny fomba fahitanao azy ;
– Ny fahatelo dia ny hoetantara mitohyna koa hoe “histoire continue”.
Publié dans SAVARAVINA NA FAMPIDIRANA AMIN’NY ANKAPOBENY